जीवनमा प्रवेश (५) | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जीवनमा प्रवेश (५)
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२०
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “पत्रुसले येशूलाई कसरी चिने” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२२
अब पत्रुसले हिँडेको त्यही मार्गलाई तैँले स्पष्ट रूपमा देख्‍न सक्‍नुपर्छ। यदि तैँले पत्रुसको मार्गलाई स्पष्ट रूपमा देख्‍न सक्छस् भने, आज गरिने कामको बारेमा तँ निश्‍चित हुनेछस्, ताकि तैँले कुनै गुनासो गर्ने छैनस्, वा निष्क्रिय बस्ने छैनस्, वा कुनै कुराको तृष्णा गर्नेछैनस्। त्यो समयको पत्रुसको भावनालाई तैँले अनुभव गर्नुपर्छ: तिनी शोकले ग्रस्त थिए; तिनले भविष्य वा आशीषहरूको लागि अनुरोध गर्न छाडे। तिनले संसारमा लाभ, खुशी, ख्याति, वा सम्पत्तिको खोजी गरेनन्; तिनले सबैभन्दा अर्थपूण जीवन मात्रै जिउन खोजे, जुन परमेश्‍वरको प्रेमको ऋण तिर्नु र आफूले सबैभन्दा बहुमूल्य ठानेको कुरा परमेश्‍वरलाई सुम्पनु थियो। त्यसपछि तिनी आफ्‍नो हृदयमा सन्तुष्ट हुन्थे। तिनले धेरै पटक येशूलाई यी शब्‍दहरूद्वारा प्रार्थना गर्थे: “प्रभु येशू ख्रीष्ट, एक पटक मैले तपाईंलाई प्रेम गरेँ, तर मैले तपाईंलाई साँचो रूपमा कहिल्यै प्रेम गरिन। तपाईंप्रति ममा विश्‍वास छ भनेर मैले भनेको भए तापनि, मैले तपाईंलाई साँचो हृदयले कहिल्यै प्रेम गरिन। मैले तपाईंलाई सराहना मात्र गरेँ, तपाईंलाई आदरपूर्वक प्रेम गरेँ, र तपाईंको याद गरेँ, तर मैले तपाईंलाई न त साँचो रूपमा कहिल्यै प्रेम गरेँ, नत तपाईंमा कहिल्यै साँचो विश्‍वास नै राखेँ।” संकल्प गर्नको लागि तिनले निरन्तर प्रार्थना गरे, र तिनी येशूको वचनद्वारा सँधै उत्साहित हुन्थे र तिनबाट उत्प्रेरणा लिन्थे। पछि, अनुभवको एक अवधिपछि, येशूले तिनलाई उहाँप्रति अझै तड्पिन बाध्य तुल्याउँदै तिनको जाँच गर्नुभयो। तिनले भने: “प्रभु येशू ख्रीष्ट! म कति धेरै तपाईंको याद गर्छु, र तपाईंलाई हेर्ने तृष्णा गर्छु। ममा धेरै कुराको कमी छ, र तपाईंको प्रेम जति म तपाईंलाई दिन सक्दिन। मलाई चाँडै नै लैजानुहोस् भनेर म तपाईंलाई बिन्ती गर्छु। तपाईंलाई कहिले मेरो खाँचो पर्नेछ? तपाईंले मलाई कहिले लैजानुहुनेछ? कहिले फेरि मैले तपाईंको मुहार हेर्नेछु? यो शरीरमा जिउन, निरन्तर भ्रष्ट भइरहन म चाहन्‍नँ, नत अब उप्रान्त म विद्रोह नै गर्न चाहन्छु। सकेसम्‍म चाँडो मसँग भएको सबै कुरा तपाईंलाई समर्पित गर्न म तयार छु, र अब उप्रान्त म तपाईंलाई दुःखित तुल्याउन चाहन्‍नँ।” तिनले यसरी नै प्रार्थना गरे, तर येशूले तिनलाई सिद्ध पार्नुहुनेछ भन्‍ने बारेमा तिनलाई त्यो बेला थाहा थिएन। तिनको परीक्षाको वेदनाको बेला, येशू फेरि तिनीकहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्‍नुभयो: “पत्रुस, म तँलाई सिद्ध बनाउन चाहन्छु, ताकि तँ एक फलको टुक्रा बन्छस्, जुन तँलाई मैले बनाएको सिद्धताको हिरा हुन्छ, र जसप्रति म आनन्दित हुनेछु। के तैँले मेरो लागि साँचो रूपमा गवाही दिन सक्छस्? के तैँले तँलाई मैले जे गर्न भनेको छु सो गरेको छस्? के मैले बोलेको वचनमा तँ बाँचेको छस? एक पटक तैँले मलाई प्रेम गरिस, तर तैँले मलाई प्रेम गरे पनि, के तैँले म भएर बाँचेको छस? तैँले मेरो लागि के गरेको छस्? तँ मेरो प्रेमको लागि अयोग्य छस् भन्‍ने कुरालाई तैँले पहिचान गरिस्, तर तैँले मेरो लागि के गरेको छस?” आफूले येशूको लागि केही पनि गरेको छैन भन्‍ने पत्रुसले देखे र आफ्‍नो जीवन परमेश्‍वरलाई दिन्छु भनी गरेको आफ्‍नो पहिलेको शपथलाई स्मरण गरे। अनि त्यसैले, तिनले फेरि गुनासो गरेनन्, त्यसपछिको तिनको प्रार्थना अझै उत्तम हुँदै गयो। तिनले यसो भन्दै प्रार्थना गरे: “प्रभु येशू ख्रीष्ट! एक पटक मैले तपाईंलाई छोडेँ, र तपाईंले पनि मलाई एक पटक छोड्नुभयो। हामीले एक-अर्काबाट अलग बसेर, अनि सँगै बसेर समय बिताएका छौं। तैपनि तपाईंले अरू सबैले भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। मैले तपाईंको विरुद्धमा बारम्‍बार विद्रोह गरेको छु र तपाईंलाई बारम्‍बार दुःखी तुल्याएको छु। म यस्ता कुराहरूलाई कसरी बिर्सन सक्छु र? तपाईंले मेरो जीवनमा गर्नुभएको कामलाई र तपाईंले मलाई सुम्पनुभएको कुरालाई म सँधै मनमा राख्छु र कहिल्यै बिर्सँदिन। तपाईंले ममा गर्नुभएको कामको लागि मैले आफूले सकेजति सबै कुरा गरेको छु। मैले के गर्न सक्छु त्यो तपाईंलाई थाहा छ, र मैले कुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु त्यो पनि तपाईंले जान्‍नुहुन्छ। म तपाईंको योजनाबद्ध कार्यमा समर्पित हुन चाहन्छु, र मसँग भएको सबै कुरा तपाईंमा समर्पित गर्नेछु। मैले तपाईंको लागि के गर्न सक्छु त्यो तपाईंलाई मात्र थाहा छ। शैतानले मलाई धेरै झुक्‍काएको भए तापनि र मैले तपाईंको विरुद्ध विद्रोह गरेको भए तापनि, ती अपराधहरूका निम्ति मलाई तपाईंले याद गर्नुहुन्‍न र तिनीहरूको आधारमा तपाईंले मलाई व्यवहार गर्नुहुन्‍न भनी म विश्‍वास गर्छु। म मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईंमा नै समर्पित गर्न चाहन्छु। म केही कुरा पनि माग्दिन, नत मसँग अरू आशा वा योजना नै छ; तपाईंको अभिप्राय अनुसार काम गर्ने र तपाईंको इच्‍छा अनुसार गर्ने मात्रै मेरो इच्‍छा छ। तपाईंको तीतो कचौराबाट म पिउनेछु, र आज्ञा गर्नलाई म तपाईंकै हुँ।”
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२३
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२४
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२७
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२८
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५२९
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३०
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३१
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरूको “अध्याय ६” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३२
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरूका रहस्यहरूको अर्थ-अनुवादहरूको “पत्रुसको जीवनको बारेमा” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३३
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “अन्धकारको प्रभावदेखि उम्की, र तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन सक्नेछस्” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३४
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३७
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “के तँ जीवित भएको व्यक्ति होस्?” बाट
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३८
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “जुन मानिसहरूको स्वभाव परिवर्तन भएका छन् तिनीहरू परमेश्‍वरको वचनको वास्तविकतामा प्रवेश गरेकाहरू हुन्” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५३९
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४०
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४२
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “सिद्धता हासिल गर्न परमेश्‍वरको इच्छाप्रति सचेत होऊ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४३
यस क्षणमा, परमेश्‍वरको काम भनेको प्रत्येकलाई ठीक बाटोमा प्रवेश गर्न लगाउनु, सामान्य आत्मिक जीवन तथा साँचो अनुभवहरू प्राप्त गर्न लगाउनु, पवित्र आत्माद्वारा सञ्चालित हुन लगाउनु हो, अनि—यी कुराहरूलाई जग बनाई परमेश्‍वरका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्नु हो। राज्यको तालीमभित्र प्रवेश गर्नुको उद्देश्य तिमीहरूको प्रत्येक बोलीवचन, कार्य, चाल, विचार तथा धारणालाई परमेश्‍वरको वचनहरूभित्र प्रवेश गर्न लगाउनु हो; परमेश्‍वरद्वारा बारम्बार स्पर्श पाउन लगाउनु हो अनि त्यसद्वारा उहाँको निम्ति प्रेमको हृदय विकास गर्नु हो; अनि तँलाई परमेश्‍वरको इच्छाको धेरै बोझ सम्हाल्न लगाउनु हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने मार्गमा हुन सकोस्, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ठीक मार्गमा होस्। तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने यस मार्गमा आएपछि, तँ ठीक मार्गमा हुन्छस्। तेरा विचारहरू तथा धारणाहरू, साथै तेरा गलत मनसायहरूलाई सच्याउन सकिएपछि, अनि तँ देहप्रति ध्यान दिने व्यक्तिबाट परमेश्‍वरको इच्छाप्रति ध्यान दिने व्यक्तिमा परिवर्तन भएपछि, अनि तँ गलत मनसायहरूको उदय हुँदा त्यसले ल्याउने विकर्षणहरूलाई रोक्न सक्षम भएर परमेश्‍वर इच्छाअनुरूप चल्ने भएपछि—यदि तैँले यो रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छस् भने तँ जीवन अनुभवको ठीक मार्गमा छस्। तेरो प्रार्थनाका अभ्यासहरू ठीक मार्गमा भएपछि, तेरा प्रार्थनाहरूमा तँ पवित्र आत्माद्वारा छोइनेछस्। जब-जब तैँले प्रार्थना गर्छस्, तँलाई पवित्र आत्माले छुनुहुनेछ; जब तैँले हरेक पल्ट प्रार्थना गर्छस्, तैँले परमेश्‍वरको सामु आफ्नो हृदयलाई शान्त तुल्याउन सक्नेछस्। जब तैँले हरेक पल्ट प्रार्थना गर्छस्, तैँले परमेश्‍वरको सामु आफ्नो हृदयलाई शान्त तुल्याउन सक्नेछस्। तैँले हरेक पल्ट परमेश्‍वरका वचनहरूको अध्याय खाएपछि र पिएपछि, यदि तैँले उहाँले अहिले गरिरहनुभएको कामलाई बुझ्न सक्छस् अनि कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी सहकार्य गर्ने, कसरी प्रवेश हासिल गर्ने सो सिक्‍न सक्छस् भने, तब मात्रै परमेश्‍वरका वचनहरूको तेरो खुवाई र पियाईले परिणामहरू उत्पन्न गर्नेछन्। जब, परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा तैँले प्रवेशको मार्ग भेट्टाउन सक्छस् अनि परमेश्‍वरको कामको वर्तमान गतिशीलता, साथै पवित्र आत्माको कामको दिशालाई ठम्याउन सक्छस्, तब तँ ठीक मार्गमा प्रवेश गरेको हुनेछस्। परमेश्‍वरका वचनहरू खाँदा र पिउँदा यदि तैँले मुख्य बुँदाहरूलाई बुझेको छैनस् अनि त्यसपछि अभ्यास गर्नका लागि बाटो भेट्टाउन अझै असक्षम छस् भने, यसले परमेश्‍वरका वचनहरू कसरी ठीक प्रकारले खाने र पिउने भन्‍ने तँलाई अझै थाहा छैन, अनि तैँले त्यसो गर्ने विधि वा सिद्धान्त पत्ता लगाएको छैनस् भन्‍ने देखाउँछ। परमेश्‍वरले हाल गरिरहनुभएको कामलाई यदि तैँले राम्ररी बुझेको छैनस् भने, उहाँले तँलाई सुम्पिनुहुने कामहरू तैँले स्वीकार गर्न सक्‍नेछैनस्। परमेश्‍वरले हाल गर्नुहुने काम मानिसहरू प्रवेश गर्नैपर्ने र तिनीहरूले अहिले नै बुझ्नुपर्ने काम हो। के तिमीहरूले यी कुराहरूलाई राम्ररी बुझेका छौ?
यदि तँले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई प्रभावकारी रुपले खान्छस् र पिउँछस् भने, तेरो आत्मिक जीवन सामान्य हुन्छ, अनि तैँले जस्तोसुकै परीक्षाहरूको सामना गरे तापनि, जस्तोसुकै परिस्थितिहरूसित जम्काभेट गर्नुपरे तापनि, तैँले जस्तोसुकै शारीरिक रोगव्याधिहरू सहनु परे तापनि, तँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट विमुख हुनुपरे तापनि वा तैँले पारिवारिक समस्याहरू सामना गर्नु परे तापनि, तैँले परमेश्‍वरको वचन सामान्य रुपमा खान र पिउनसक्छस्, सामान्य रुपले प्रार्थना गर्न सक्छस्, सामान्य रुपले मण्डली जीवनलाई निरन्तरता दिन सक्छस्; यदि तैँले यी सबै हासिल गर्न सक्छस् भने, यसले तँ ठीक मार्गमा छस् भन्‍ने देखाउनेछ। कोही मानिसहरू धेरै नै कमजोर हुन्छन् अनि तिनीहरूसित दृढताको कमी हुन्छ। सानो बाधाको सामना गर्नुपर्दा पनि तिनीहरू बच्चा जस्तो रुन्छन् अनि नकारात्मक हुन्छन्। सत्यताको खोजी गर्नको लागि दृढता तथा संकल्पको आवश्यकता पर्छ। यदि तँ यस पटक परमेश्‍वरको इच्छालाई सन्तुष्ट तुल्याउन असफल भएको छस् भने, तैँले आफैलाई घृणा गर्न सक्‍नुपर्छ, अनि अर्कोपल्ट सफल हुन चुपचाप अठोट गर्नुपर्छ। यदि यस पटक, तँ परमेश्‍वरको बोझप्रति सचेत भएको थिइनस् भने, भविष्यमा त्यस्तै बाधा सामना गर्नुपर्दा देहको विरुद्धमा विद्रोह गर्न तैँले निश्चय गर्नुपर्छ अनि परमेश्‍वरको इच्छालाई सन्तुष्ट तुल्याउन संकल्प गर्नुपर्छ। यसरी नै तँ प्रशंसायोग्य हुनेछस्। कोही मानिसहरू आफ्ना विचारहरू वा धारणाहरू ठीक छन् कि छैनन् भनेर समेत जान्दैनन्। ती मानिसहरू मूर्खहरू हुन्। यदि तँ आफ्नो हृदयलाई काबू गर्न अनि देहको विरुद्धमा विद्रोह गर्न चाहन्छस् भने, पहिले तैँले तेरा मनसायहरू ठीक छन् कि छैनन् भनी जान्नैपर्छ, तब मात्र तैँले तेरो हृदयलाई काबूमा राख्‍न सक्छस्। यदि तेरा मनसायहरू ठीक छन् वा छैनन् भनी तँलाई थाहा छैन भने तेरो हृदयलाई काबू गर्न र देहको विरुद्धमा विद्रोह गर्न तँलाई सम्भव होला त? यदि तैँले विद्रोह गर्छस् भने पनि, तैँले अन्यौल तरिकाले त्यसो गर्नेछस्। तेरा पथभ्रष्ट मनसायहरूको विरुद्धमा कसरी विद्रोह गर्ने भनी तैँले जान्नुपर्छ। देहको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुको अर्थ यही नै हो; आफ्ना मनसायहरू, विचारहरू तथा धारणाहरू गलत छन् भन्‍ने जानीसकेपछि, तैँले तुरुन्तै आफ्‍नो मार्ग बदल्‍नुपर्छ र ठीक मार्गमा हिँड्नुपर्छ। यो विषयलाई पहिले समाधान गर्, अनि यस सम्बन्धमा प्रवेश हासिल गर्न आफैलाई तालीम दे, किनभने आफ्ना मनसायहरू ठीक छन् कि छैनन् भन्‍ने तँलाई नै राम्रोसित थाहा छ। तेरा गलत मनसायहरू सधार गरिसकेपछि अनि ती अब परमेश्‍वरको प्रयोजनको निम्ति भइसकेपछि, तैँले आफ्नो हृदयलाई काबू राख्ने लक्ष्य हासिल गरिसकेको हुनेछस्।
तिमीहरूले अहिले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा परमेश्‍वरको ज्ञान र उहाँको काम प्राप्त गर्नु हो। मानवजातिमाथि पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्‍ने पनि तैँले जान्नैपर्छ; ठीक मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि यी कार्यहरू अत्यावश्यक छन्। तैँले यो महत्वपूर्ण बूँदा बुझिसकेपछि सो गर्न तेरो लागि सजिलो हुनेछ। तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस्, अनि तँ परमेश्‍वरलाई चिन्छस्, यसले तेरो विश्‍वास साँचो हो भनी देखाउँदछ। यदि तैँले अनुभव प्राप्त गर्न जारी राख्छस् तापनि तैँले अझै परमेश्‍वरलाई चिन्न सक्दैनस् भने, तँ निश्चय नै यस्तो व्यक्ति होस् जसले परमेश्‍वरको विरोध गर्दछ। आजको देहधारी परमेश्‍वरलाई विश्‍वास नगरी जसले येशूलाई मात्र विश्‍वास गर्छन्, तिनीहरू सबै दोषी ठहरिन्छन्। तिनीहरू सबै पछिल्ला दिनका फरिसीहरू हुन्, किनभने तिनीहरूले आजको परमेश्‍वरलाई स्वीकार गर्दैनन्; तिनीहरू सबै परमेश्‍वरको विरोधमा छन्। येशूप्रतिको तिनीहरूको आराधना जतिसुकै समर्पित भए तापनि, यो सबै व्यर्थमा हुनेछ; परमेश्‍वरलाई तिनीहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुनेछैन। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छु भनी दाबी गर्नेहरू तापनि आफ्नो हृदयमा परमेश्‍वरको साँचो ज्ञान नबोक्‍नेहरू सबै ढोङ्गीहरू हुन्!
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४४
परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने कुराको खोजी गर्नको लागि व्यक्तिले पहिले उहाँद्वारा सिद्ध तुल्याइनुको अर्थ के हो, साथै सिद्ध तुल्याइनका निम्ति कस्ता शर्तहरू पालना गर्नुपर्छ भनी बुझ्नुपर्छ। जब व्यक्तिले त्यस्ता विषयहरूलाई राम्ररी बुझ्छ, तब उसले अभ्यासको बाटो खोजी गर्नुपर्छ। सिद्ध तुल्याइनका निम्ति, व्यक्ति एउटा निश्चित गुणस्तरको हुनुपर्छ। धेरै मानिसहरू जन्मजातै पर्याप्त रूपले उच्च गुणस्तरका हुँदैनन्, यस्तो अवस्थामा तैँले मूल्य चुकाउनुपर्छ र व्यक्तिपरक ढङ्गले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। जति खराब तेरो गुणस्तर हुन्छ, त्यति नै बढी तँले व्यक्तिपरक ढङ्गले प्रयत्न गर्नुपर्छ। परमेश्‍वरको वचनको तेरो बुझाइ जति बढी हुन्छ र जति बढी तैँले त्यसलाई अभ्यास गर्छस्, त्यति नै चाँडै तैँले सिद्धताको बाटोमा आफ्नो पाइला राख्न सक्छस्। प्रार्थनाद्वारा तँलाई प्रार्थनाको क्षेत्रमा सिद्ध तुल्याइन सकिन्छ, परमेश्‍वरका वचनहरू खाएर अनि पिएर, तिनीहरूको सारलाई राम्ररी बुझेर, तिनीहरूको वास्तविकतालाई बाँचेर पनि तँलाई सिद्ध तुल्याइन सकिन्छ। परमेश्‍वरका वचनहरूलाई दैनिक रूपमा अनुभव गरेर तैँले आफूमा के कमी छ जान्नुपर्छ, अझ भन्ने हो भने, तैँले तेरो घातक दोषहरू तथा तेरा कमजोरीहरू के-के हुन् भनी चिन्नुपर्छ र परमेश्‍वरलाई प्रार्थना तथा बिन्ती गर्नुपर्छ। यसो गरेर, तँलाई क्रमिक रूपले सिद्ध तुल्याइनेछ। सिद्धतातर्फको बाटो यस्तो हुन्छ: प्रार्थना गर्नु; परमेश्‍वरको वचनहरूलाई खानु र पिउनु; परमेश्‍वरको वचनहरूका सारलाई राम्ररी बुझ्नु, परमेश्‍वरका वचनहरूको अनुभवमा प्रवेश गर्ने कुरा हासिल गर्नु, तँ आफैमा के कमी छ भनी जान्नु, परमेश्‍वरको कामप्रति समर्पित हुनु; परमेश्‍वरको बोझप्रति सचेत हुनु अनि परमेश्‍वरको निम्ति तेरो प्रेमद्वारा देहलाई परित्याग गर्नु; अनि तेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति निरन्तर सङ्गतिमा सामेल हुनु जसले तेरा अनुभवहरूलाई समृद्ध बनाउन सक्दछ। चाहे त्यो सामुदायिक जीवन होस् वा तेरो व्यक्तिगत जीवन, चाहे त्यो ठूलो भेला होस् वा सानो, तिनीहरू सबैले तँलाई अनुभव र तालिम प्राप्त गर्न दिन सक्छन् ताकि तेरो हृदय परमेश्‍वरको सामु शान्त हुन र उहाँमा फर्किन सकोस्। यो सबै सिद्ध तुल्याइने प्रक्रियाको भाग हो। अघि उल्लेख गरिए झैँ परमेश्‍वरका वचनहरू अनुभव गर्नु भनेको वास्तवमा तिनीहरूलाई चाख्न सक्षम हुनु र आफूलाई ती वचनहरू जिउन दिनु हो ताकि तैँले परमेश्‍वरप्रति अझ ठूलो विश्‍वास र प्रेम हासिल गर्न सक्। यस प्रकारले, तैँले क्रमिक रूपमा आफ्नो भ्रष्ट, शैतानी स्वभावलाई छोडिदिनेछस्; अनुचित अभिप्रायहरूदेखि आफैलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछस्; अनि सामान्य व्यक्तिको स्वरूपमा जिउनेछस्। परमेश्‍वरको निम्ति तँभित्र जति ठूलो प्रेम हुन्छ—भनाइको अर्थ, तेरो जति बढी भाग परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइएको हुन्छ—त्यति नै कम मात्र तँ शैतानी भ्रष्टताको काबूमा हुनेछस्। तेरा व्यवहारिक अनुभवहरूद्वारा तैँले क्रमिक रूपमा सिद्धताको बाटोमा आफ्नो पाइला राख्नेछस्। यसरी, यदि तँ सिद्ध तुल्याइने चाहना गर्छस् भने तैँले परमेश्‍वरको इच्छाप्रति सचेत हुनु र उहाँका वचनहरू अनुभव गर्नु विशेष रूपले महत्वपूर्ण छन्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४५
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरले उहाँको हृदय अनुसारकाहरूलाई सिद्ध बनाउनुहुन्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४७
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४८
पवित्र आत्मासँग प्रत्येक व्यक्तिभित्र आउने मार्ग छ, र उहाँले प्रत्येक व्यक्तिलाई सिद्ध हुने मौका दिनुहुन्छ। तेरो नकारात्मकताद्वारा तँलाई आफ्नै भ्रष्टता चिन्न दिइन्छ, र त्यसपछि नकारात्मकता फाल्दा तैँले अभ्यास गर्ने बाटो पाउनेछस्; यी सबै ती तरिकाहरू हुन् जसबाट तँलाई सिद्ध तुल्याइन्छ। यसको अतिरिक्त, निरन्तर मार्गदर्शन र तँभित्रका केही सकारात्मक कुराहरूको ज्योतिमार्फत तैँले सक्रिय रूपमा आफ्नो काम पूरा गर्नेछस्, तेरो अन्तर्दृष्ट अभिवृद्धि हुनेछ र तैँले विवेक प्राप्त गर्नेछस्। जब तेरा अवस्थाहरू राम्रा हुन्छन्, तब तँ विशेष गरी परमेश्‍वरको वचन पढ्न इच्छुक हुन्छस्, र विशेष गरी परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्न इच्छुक हुन्छस्, र तैँले सुनेका उपदेशहरूलाई आफ्नै अवस्थासँग जोड्न सक्छस्। यस्तो समयमा परमेश्‍वरले तँलाई सकारात्मक पक्षका केही कुराहरू महसुस गराउँदै तँभित्र अन्तर्दृष्टि र ज्योति दिनुहुन्छ। यसरी नै तँलाई सकारात्मक पक्षमा सिद्ध तुल्याइन्छ। नकारात्मक अवस्थाहरूमा, तँ कमजोर र निष्क्रिय हुन्छस्; तँलाई तेरो हृदयमा परमेश्‍वर नभएको महसुस हुन्छ, तैपनि परमेश्‍वरले तँलाई ज्योति प्रदान गर्नुभई अभ्यासको बाटो प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ। यसबाट बाहिर आउनु भनेको नकारात्मक पक्षमा सिद्धता हासिल गर्नु हो। परमेश्‍वरले मानिसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षमा सिद्ध तुल्याउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध भएको अनुभव गर्न सक्षम छस् कि छैनस् अनि तैँले परमेश्‍वरद्वारा आफूलाई सिद्ध तुल्याउन खोज्छस् कि खोज्दैनस् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। यदि तैँले साँच्चै परमेश्‍वरद्वारा आफूलाई सिद्ध तुल्याउन खोज्छस् भने, नकारात्मकताले तेरो हानि गर्न सक्दैन, बरु त्यसले तँमा ती कुराहरू ल्याउन सक्छ जुन अझ बढी वास्तविक छन्, र तँमा जुन कुराको कमी छ त्यो कुरा जान्न, तेरो वास्तविक अवस्थालाई बुझ्न, अनि मानिससँग केही छैन, र मानिस केही पनि होइन भन्ने कुरा बुझ्न तँलाई अझ बढी सक्षम बनाउँछ; यदि तैँले परीक्षाहरूको अनुभव गर्दैनस् भने, तँलाई ज्ञान नै हुँदैन, र तैँले जहिले पनि आफूलाई अरूभन्दा माथि र सबैभन्दा उत्तम महसुस गर्नेछस्। यी सबै कुराहरूबाट तैँले पहिले आएका सबै कुरा परमेश्‍वरद्वारा गरिएका अनि परमेश्‍वरद्वारा संरक्षित थिए भनी बुझ्नेछस्। परीक्षाहरूमा प्रवेश गर्दा तँ प्रेम वा विश्वासरहित अवस्थामा छोडिन्छस्, तँमा प्रार्थनाको कमी हुन्छ अनि तँ भजन गाउन असमर्थ हुन्छस्, र यसैबीच तैँले महसुसै नगरी आफैलाई जान्न थालिसकेको हुन्छ। परमेश्‍वरसित मानिसलाई सिद्ध तुल्याउने तरिकाहरू धेरै छन्। मानिसको भ्रष्ट स्वभावको निराकरण गर्न उहाँले हरप्रकारका वातावरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र मानिसलाई नाङ्गो पार्न विभिन्न कुराहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ; एउटा सन्दर्भमा, उहाँले मानिसलाई निराकरण गर्नुहुन्छ, अर्कोमा उहाँले मानिसलाई नाङ्गो पार्नुहुन्छ, अनि अर्कोमा उहाँले मानिसको हृदयको गहिराइमा भएका “रहस्य” खोतलेर देखाउँदै मानिसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, र मानिसलाई उसका धेरैवटा अवस्थाहरू प्रकट गर्दै उसको प्रकृति देखाउनुहुन्छ। परमेश्‍वर व्यावहारिक हुनुहुन्छ भनी मानिसले जानोस् भनी परमेश्‍वरले धेरै तरिकाहरूद्वारा—प्रकाशद्वारा, मानिसलाई निराकरणगरेर मानिसको शोधन गरेर अनि सजाय दिएर—मानिसलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५४९
तिमीहरूले अहिले के खोज्छौ? परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध हुनु, परमेश्‍वरलाई चिन्नु, परमेश्‍वरलाई प्राप्त गर्नु—वा सायद तँ ९० को दशकको पत्रुसको तरिकाले आफैलाई अगि बढाउन चाहन्छस्, वा अय्यूबको भन्दा ठूलो विश्‍वास प्राप्त गर्न चाहन्छस्, वा सायद तँ परमेश्‍वरद्वारा धर्मी कहलिन र परमेश्‍वरको सिंहासनको सामु आउन खोज्छस्, वा पृथ्वीमा परमेश्‍वरलाई प्रकटीकरण गर्न र परमेश्‍वरका निम्ति शक्तिशाली र सानदार रूपमा साक्षी दिने प्रयास गर्न खोज्छस्। तिमीहरूले जे गर्न खोजे पनि समग्रमा, तिमीहरू परमेश्‍वरद्वारा मुक्ति पाउनका निम्ति नै खोजी गर्छौ। तँ धर्मी हुन खोजे पनि, पत्रुसको बानीव्यहोरा, वा अय्यूबको विश्‍वासको खोजी गरे पनि, वा परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिन खोजे पनि, यो सब परमेश्‍वरले मानिसमा गर्नुहुने काम हो। अर्को शब्दमा भन्दा, तैंले जे खोजे पनि ती सबै परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिनका निम्ति, सबै परमेश्‍वरको वचन अनुभव गर्न, परमेश्‍वरको हृदयलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि नै हो; तैंले जे खोजे पनि, त्यो सब परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन पत्ता लगाउनका लागि, आफ्नै विद्रोही स्वभावलाई फाल्न सक्षम हुने उद्देश्यसहित वास्तविक अनुभवमा अभ्यास गर्ने मार्ग खोज्‍नको लागि, आफैभित्र सामान्य अवस्था हासिल गर्न, पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप हुनु, एक सही व्यक्ति बन्‍न र तैंले गर्ने सबै कुरामा सही अभिप्राय राख्‍नको लागि हो। तैंले यी सबै कुराहरूको अनुभव गर्नुको कारण भनेको परमेश्‍वरलाई चिन्नु र जीवनको वृद्धि हासिल गर्नु हो। तैंले अनुभव गर्ने कुरा परमेश्‍वरको वचन र वास्तविक घटनाहरू, साथसाथै तेरो वरिपरिका मानिसहरू, वस्तुहरू र स्थितिहरू भए पनि, अन्ततः तँ परमेश्‍वरलाई चिन्न र परमेश्‍वरबाट सिद्ध हुन सक्छस्। एक धर्मी व्यक्तिको मार्गमा हिँड्न खोज्नु वा परमेश्‍वरको वचन अभ्यास गर्न खोज्‍नु: यी चालू मार्ग हुन्, जबकि परमेश्‍वरलाई चिन्नु र परमेश्‍वरबाट सिद्ध हुनु भनेको चाहिँ गन्तव्य हो। यदि तैँले अहिले परमेश्‍वरबाट सिद्धता खोजे पनि वा परमेश्‍वरका लागि साक्षी दिन खोजे पनि, त्यो सबै आखिर परमेश्‍वरलाई जान्‍नका निम्ति नै हो; यो उहाँले तँभित्र गर्नुभएको काम व्यर्थ नहोस् भनेर हो, यसरी तँ अन्ततः परमेश्‍वरको वास्तविकता जान्न, उहाँको महानता थाहा पाउन, र अझ बढी परमेश्‍वरको नम्रता र गोप्यता जान्न, र परमेश्‍वरले तँमा गर्नुहुने धेरै कामको बारेमा जान्न सक्। परमेश्‍वरले आफूलाई यति स्तरसम्म विनम्र तुल्याउनुभएको छ कि उहाँले यी फोहोरी र भ्रष्ट मानिसहरूमा काम गर्नुहुन्छ र मानिसहरूको यस समूहलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ। परमेश्‍वर मानिसहरूको माझमा जिउन र खानका निम्ति, मानिसहरूको गोठालो गर्न र मानिसहरूलाई चाहिने कुराहरू प्रदान गर्नको निम्ति मात्र देह बन्नुभएन। बरु त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो छ कि उहाँले मुक्ति र विजयको आफ्नो शक्तिशाली काम यी असहनीय तवरमा भ्रष्ट रहेका मानिसहरूका निम्ति गर्नुहुन्छ। उहाँले यी अति भ्रष्ट मानिसहरूलाई मुक्त गर्नको लागि ठूलो रातो अजिङ्गरको केन्द्रमा आउनुभयो ताकि सबै मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्न र नयाँ बनाउन सकियोस्। परमेश्‍वरले सहनुहुने विशाल कठिनाइ देहधारी परमेश्‍वरले भोग्ने कठिनाइ मात्र होइन, बरु सबैभन्दा बढी त परमेश्‍वरको आत्माले अत्यधिक अपमान सहनुपर्दछ—उहाँले आफैलाई यत्ति धेरै विनम्र बनाउनुहुन्छ र लुकाउनुहुन्छ कि उहाँ एक साधारण व्यक्ति बन्नुहुन्छ। परमेश्‍वर देहधारी हुनुभयो र देहको रूप लिनुभयो ताकि मानिसहरूले उहाँसँग सामान्य मानव जीवन र सामान्य मानवीय खाँचोहरू रहेछन् भनी देख्न सकून। यो कुरा परमेश्‍वरले आफूलाई हदैसम्म विनम्र तुल्याउनुभएको छ भनी प्रमाणित गर्न पर्याप्त छ। परमेश्‍वरको आत्मालाई देहमा अनुभव गरिन्छ। उहाँको आत्मा यति उच्च र महान् छ, तापनि उहाँले उहाँको आत्माको काम गर्नको लागि एक सामान्य मानिसको, एक नगण्य मानिसको रूप धारण गर्नुहुन्छ। योग्यता, अन्तरदृष्टि, चेतना, मानवता, र तिमीहरू प्रत्येकको जीवनले तिमीहरू परमेश्‍वरको यस प्रकारको कामलाई स्वीकार गर्न साँच्चै लायक छैनौ भन्ने देखाउँछ। तिमीहरू आफ्नो खातिर परमेश्‍वरलाई यस्तो कठिनाइ सहन दिनको लागि साँच्चै लायक छैनौ। परमेश्‍वर धेरै महान् हुनुहुन्छ। उहाँ अति नै सर्वोच्च हुनुहुन्छ, तर मानिसहरू अति नै तुच्छ छन्, तैपनि उहाँले तिनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ केवल मानिसहरूका निम्ति प्रबन्ध गर्न, मानिसहरूसँग बोल्न मात्र देहधारी बन्नुभएको थिएन, बरु उहाँ त मानिसहरूसँगसँगै बस्नुहुन्छ। परमेश्‍वर औधि नम्र, औधि प्रेमिलो हुनुहुन्छ। यदि, परमेश्‍वरको प्रेम उल्लेख गर्ने बित्तिकै, परमेश्‍वरको अनुग्रहको बारेमा उल्लेख गर्ने बित्तिकै, तँ ठूलो प्रशंसा गर्दै आँसु झार्छस् भने, यदि तँ यस्तो स्थितिमा आइपुगिस् भने, तैंले परमेश्‍वरको बारेमा साँचो ज्ञान प्राप्त गरेको छस्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५०
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५२
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५३
तिमीहरूको बीचमा भइरहेको यो काम के काम गरिनुपर्छ भन्ने अनुसार नै तिमीहरूमा गरिएको हुनुपर्दछ। यी मानिसहरूलाई विजय गरेपछि, मानिसहरूको एउटा समूह सिद्ध हुनेछ। त्यसैले, अहिलेको धेरै काम तिमीहरूलाई सिद्ध बनाउने लक्ष्यको तयारीका लागि पनि हो, किनभने सिद्ध हुन सक्ने धेरै मानिसहरू सत्यको निम्ति भोकाइरहेका छन्। यदि विजयको काम तिमीहरूमा गरिन्छ र त्यसपछि थप काम केही पनि गरिँदैन भने, त्यसपछि के यो सत्यको खोजी गरिरहेको व्यक्तिले यसलाई प्राप्त गर्ने घटना बन्दैन? अहिलेको कामले पछि मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने बाटो खोल्ने लक्ष्य राख्दछ। यद्यपि मेरो काम भनेको विजयको काम मात्र हो, मैले भन्ने जीवनको बाटो मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने तयारीका लागि हो। विजयपछि आउने काम मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने काममा केन्द्रित हुन्छ, र जित्ने काम सिद्ध गर्ने कामको जग बिछ्याउनका लागि गरिन्छ। मानिस विजय प्राप्त गरेपछि मात्र सिद्ध हुन्छ। अहिले, मुख्य काम भनेको जित्नु हो; पछि, सत्य खोज्ने र त्यसको पछि लाग्नेहरू सिद्ध हुनेछन्। सिद्ध हुनुले मानिसहरूको प्रवेशको सक्रिय पक्षहरू समावेश गर्दछ: के तिमीहरूसँग परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने हृदय छ? तिमीहरूले यो बाटो हिँड्दै गर्दा तिमीहरूको अनुभवको गहिराइ के भएको छ? परमेश्‍वरप्रतिको तिमीहरूको प्रेम कत्तिको चोखो छ? तिमीहरूको सत्यको अभ्यास कत्तिको सही छ? सिद्ध हुनका लागि, कुनै व्यक्तिसँग मानवताको सबै पक्षहरूको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ। यो एउटा आधार रेखा आवश्यकता हो। तिनीहरू सबै जो विजय गरेर पनि सिद्ध हुन सक्दैनन्, सेवा गर्ने पात्रहरू बन्छन् र अन्ततः अझै पनि आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्याँकिन्छन् र अझै पनि अतल खाडलमा खस्नेछन्, किनभने तिमीहरूको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन र तँ अझै पनि शैतानकै हुनुहुन्छ। यदि कुनै मानिसमा सिद्धताका लागि सर्तहरूको कमी छ भने, त्यो व्यक्ति बेकम्मा हो—ऊ फोहोर, एक औजार हो, जुनले आगोको परीक्षणको सामना गर्न सक्दैन! अहिले परमेश्‍वरप्रति तेरो प्रेम कत्तिको ठूलो छ? तेरो आफ्नो घृणा कत्तिको ठूलो छ? तैँले शैतानलाई वास्तवमा कत्तिको गहन रूपमा चिनेको छस्? के तेरो आफ्नो संकल्प बलियो छ? के तेरो मानवताभित्रको तेरो जीवन सहिसँग नियमन भएको छ? के तेरो जीवन बदलिएको छ? के तँ नयाँ जीवन बाँचिरहेको छस्? के तिमीहरूको जीवनको दृष्टिकोण बदलिएको छ? यदि यी कुराहरू परिवर्तन भएका छैनन् भने, तिमीहरू पछि नहटे पनि सिद्ध हुन सक्दैनौ; बरु, तँलाई विजय गरिएको मात्र छ। जब तँलाई परीक्षण गर्ने समय आउँछ, तँमा सत्यको अभाव हुनेछ, तेरो मानवता असामान्य हुनेछ, र तँ बोझको जनावर जत्तिकै निम्न हुनेछस्। तेरो एक मात्र प्राप्ति विजय गरिएको हुनु थियो—तँ मैले विजय गरेको केवल एक चीज हुन सक्छस्। जसरी गधा एक पटक मालिकको कुटाइको अनुभव गरेपछि, डराउँछ र मालिकलाई हरेक पटक देख्दा केही गर्न डराउँछ, तँ केवल विजय गरिएको गधा मात्र हुनेछस्। यदि कुनै व्यक्तिसँग ती सकारात्मक पक्षहरू छैनन् र त्यसको सट्टामा निष्क्रिय र डरलाग्दो, डरपोक र सबै कुरामा हिचकिचाहट, स्पष्ट रूपमा कुनै कुरा बुझ्न असमर्थ, सत्यलाई स्वीकार गर्न असमर्थ, अभ्यासको लागि कुनै मार्ग विनाको, र त्यो भन्दा पनि परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने हृदय विनाको हुन्छ—यदि एक व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई कसरी प्रेम गर्ने, कसरी अर्थपूर्ण जीवन बिताउने वा कसरी वास्तविक व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा बुझेको छैन भने—त्यस्तो व्यक्तिले कसरी परमेश्‍वरको साक्षी दिन सक्छ? यसले तेरो जीवनको थोरै मूल्य छ र तँ विजय गरिएको गधा होस् भन्ने देखाउँछ। तँलाई जित्नेछ, तर यसको केवल अर्थ यो हो कि तैँले ठूलो रातो अजिङ्गर त्यागेर यसको अधिकार क्षेत्रमा आज्ञापालन गर्न अस्वीकार गर्यौ; यसको मतलब तँ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर विश्‍वास गर्छस्, परमेश्‍वरको सबै योजनाहरू पालना गर्न चाहन्छस्, र तँसँग कुनै गुनासो छैन भन्ने हुन्छ। तर सकारात्मक पक्षहरूका लागि, के तँ परमेश्‍वरको वचनमा जिउन र परमेश्‍वरलाई प्रकट गर्न सक्छस्; यदि तँमा यीमध्ये कुनै पनि पक्षहरू छैनन् भने, यसको अर्थ तँलाई परमेश्‍वरले हासिल गर्नुभएको छैन र तँ केवल विजय गरिएको गधा होस् भन्ने हुन्छ। तँमा केही कुरा इच्छित छैन र पवित्र आत्माले तँमा काम गरिरहनुभएको छैन। तँमा मानवताको पनि कमी छ; परमेश्‍वरले तँलाई प्रयोग गर्न असम्भव छ। तँलाई परमेश्‍वरले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र तँ अविश्‍वासी जनावरहरू र हिँड्ने मृत मानिसहरू भन्दा सय गुणा राम्रो हुनुपर्दछ—यस स्तरमा पुग्ने व्यक्तिहरू मात्र सिद्ध हुन योग्य छन्। यदि कसैसँग मानवता छ र विवेक छ भने मात्र यो परमेश्‍वरको प्रयोगको लागि उपयुक्त व्यक्ति हो। तँ सिद्ध भएमा मात्र तँलाई मानवको रूपमा लिइन्छ। सिद्ध भएकाहरू मात्र अर्थपूर्ण जीवन बाँच्ने मानिसहरू हुन्। त्यस्ता मानिसहरू ले मात्र परमेश्‍वर सामु अझ ठूलो स्वरले साक्षी दिन सक्छन्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५४
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “सिद्ध पारिएकाहरूका निम्ति दिइएका प्रतिज्ञाहरू” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५५५
अघिल्लो: जीवनमा प्रवेश (४)
अर्को: जीवनमा प्रवेश (६)